नयाँ घाँस पलाउँछ भन्दै सामुदायिक वनका उपभोक्ताले नै लगाउँछन् आगो
मंगलवार, भाद्र ३१, २०७६
Tue, Sep 17, 2019 at 6:54pm
कुन रोग भएकाले कस्तो जुस पिउँदा राम्रो ? #आहा खबर# प्रसूतिगृहको अक्सिन प्लान्टमा विस्फोट, २ जना घाइते #आहा खबर# यी अंगमा कोठी हुने मानिसको हातमा कहिल्यै टिक्दैन पैसा #आहा खबर# एभरेस्ट प्रिमियर लिग (इपिएल) भारतीय च्यानल डिस्पोर्टबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने #आहा खबर# भक्तपुरमा प्रसिद्ध परम्परागत मूपात्र जात्रा शुरु #आहा खबर# बिहीबारसम्म मनसुनी गतिविधि बढ्ने, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह #आहा खबर# वैदेशिक रोजगारीलाई कम गरिन्छ : मन्त्री लेखबहादुर थापा #आहा खबर# पृथ्वी प्रज्ञा–पुरस्कार शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई ! #आहा खबर# आकस्मिक अवतरण गरिएका हेलिकप्टर आठ घण्टापछि उडे #आहा खबर# प्रदेश नं १ सन् २०२५ भित्र बालविवाहमुक्त प्रदेश बन्ने ! #आहा खबर# गोजुरियो कराते च्याम्पियनसिपमा भाग लिन नेपाली टोली मलेसियातर्फ #आहा खबर# बिपी विचार राष्ट्रिय समाजको जापान शाखा गठन #आहा खबर# डोटीमा मदिरा ओसारपसारमा बालबालिकाको खुलेआम प्रयोग ! #आहा खबर# चाडपर्वलाई लक्षित गरेर झापामा एक हजार बढी प्रहरी परिचालन #आहा खबर# डेङ्गु सङ्क्रमितको सङख्या २ हजार नाघ्यो, सङ्ख्या बढ्दै #आहा खबर#
सोमबार, ६ जेष्ठ २०७६,	आहाखबर
डडेल्धुरा, ६ जेठ ।
डडेल्धुराका सामुदायिक वनमा आगो लाग्नेक्रम शुरु भएको छ । सुक्खायाम र गर्मी बढेसँगै जिल्लाका करीब दर्जनभन्दा बढी सामुदायिक र सल्लेरी वनमा आगो लाग्ने गरेको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लाका त्रिशूल, असुर्पा, अजयमेरु, भद्रपुर र कैलपालमाण्डौँका सामुदायिक वनमा र अमरगढी नगरपालिका– १० राई बस्ती नजिकको वनका साथै महाभारत र चुरे वन क्षेत्रमा समेत आगो लाग्ने गरेको छ ।
साथै जिल्लाका अन्य सामुदायिक तथा सरकारी वनमा समेत आगो लाग्ने गरेको वनमा आबद्ध पदाधिकारी बताउँछन् । स्थानीय उपभोक्ताको लापरवाहीका कारण जङ्गलमा बढी आगलागी हुने गरेको डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत प्रकाश जोशीले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “चुरोट, बिँडी खाएर जथाभावी फाल्ने तथा अन्य लापर्वाहीले वनमा आगलागी हुने गर्छ ।” नयाँ घाँस पलाउँछ भन्दै सामुदायिक वनका उपभोक्ता आफैँ आगो लगाउने गर्दछन् ।
निजी खोरिया, गजाल (घास काट्नका लागि बनाइएको क्षेत्र) मा उपभोक्ताले नयाँ घाँसका लागि आगो लागाउने र त्यही आगो सुक्खायाममा नियन्त्रमा ल्याउन नसक्दा अन्य वनसमेत विनाश हुने गर्दछन् ।
गाईगोरु चराउन सजिलो हुने भन्दै सल्लेरी वनमा उपभोक्ताले नै आगो लगाउँछन् तर अत्यधिक स्याउला र सोत्तरका कारण आगो नियन्त्रण गर्न नसक्दा वन विनाश हुने गर्दछ । आगो लाग्दा भिरालो र घना जङ्गलका स्याउला, सोत्तर र हावाका कारण फैलने भएकाले अन्य वन पनि विनाश हुँदै आएको छ ।
सुक्खायाममा सल्लेरी वनमा आगो लगाउनेक्रम स्थानीय बासिन्दाबाटै बढी हुने गरेको तथ्य फेला परेको यसबारे जनचेतना जगाउँदा पनि सार्थकरूप लिन नसेको रेञ्जर धनबहादुर झुकालको भनाइ छ ।
आगलागीका कारण साना बुट्यान र नयाँ बिरुवासमेत विनाश हुन्छ ।
जिल्लामा करीब ६०० सामुदायिक र कबुलियती वन छन् । हरेक वर्ष गर्मीयाममा जिल्लाका प्रायजसो सल्लेरी वन र अन्य वनमा आगलागीका कारण वन विनाश हुँदै आएको छ ।
जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार एक लाख ५३ हजार आठ हेक्टर जमीनमध्ये एक लाख १५ हजार १५९ हेक्टर वन जङ्गल रहेको छ । वर्षेनी यहाँका ५० प्रतिशतभन्दा बढी वनमा आगो लाग्ने गर्दछ ।
कालोधन वैध बनाउन घरजग्गामा लगानी
अब कसैको कुरा काटे ३ घण्टा सडकको फोहोर संकलन गर्ने सजाय !!
यसरी हुन थाल्यो मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार
७० हजारमा वडा अध्यक्षद्वारा झोलुङ्गे पुल बिक्री !
७३ बर्षको उमेरमा यरामतीले जन्माइन जुम्ल्याह छोरी
सिञ्जा क्षेत्रमा भालु आतङ्क, स्थानीयवासी त्रासमा
उच्चस्तरीय आयोगले २५ वर्षअघि अतिक्रमित भनी औंल्याएको १८ सय रोपनी जग्गा सरकारले अझै खोजेन्
गिदखोरामा अजिङ्गर फेला परेपछि...
ओठको आकारबाटै थाहा पाउनुहोस आफ्नो भाग्य
सबैभन्दा लामो अंग्रेजी शब्द, जसलाई उच्चारण गर्न नै साढे ३ घण्टा लाग्छ
जनप्रतिनिधि आफैले लिए कुखुरा
संसारकै विशाल जंगल, जहाँ उम्लिरहेको नदी छ !
शालिकराम हत्या प्रकरण : फेरि थपिने रवि लामिछानेकाे म्याद !
बालगृहका नाममा यसरी पनि हुन्छ ठगी
उत्तेजक होर्डिङ बोर्ड : महिलाको वक्षस्थलका कारण दैनिक ५ सय सडक दुर्घटना
यस्ता छन् युवतीको मन जित्ने तरिका !
पूर्वयुवराज पारसले गरे ड्युटीमा रहेका प्रहरीमाथि हातपात (भिडियाेसहित)
जुम्लामा बिजुली युनिटकै १ सय !
रेष्टुरेण्टमा खाना ढिलो ल्याएको भन्दै वेटरको हत्या !
कुन रोग भएकाले कस्तो जुस पिउँदा राम्रो ?
प्रसूतिगृहको अक्सिन प्लान्टमा विस्फोट, २ जना घाइते